CAYAARAHA SOMALIA Archives - Raaso News Network ( RNN )
Home » CAYAARAHA SOMALIA
Kulan xiiso badan ayaa galabta ka dhici doono garoonka Banadir Stadium kaa oo u dhaxeeya Kooxda Qurbo Joogta Soomaalida iyo Heegan Fc, cayaartan ayaa ah mid Saaxiibtinimo. Kooxda Qurbo Joogta Somalia ayaa kulankoodii labaad galabta cayaari doonta iyado ay xusid mudan tahay in laga soo adkaaday kulankoodii koowad ay la dheeleyn Naadiga Elman. Cayaartoyda waxey ka kala yimaadeyn Yurub iyo ...
Maamulka gobolka ayaa xaflad qurux badan u sameeyay Xalay Xeritaanka cayaaraha kubadda cagta degmooyinka gobolka Banaadir. xafladan oo ay kasoo qayb galeen qaybaha kale gedisan ee maamulka gobolka, wasaaradda dhaliyarada iyo isboortiga, xil dhibaano iyo bahda isboortiga, waxaa lagu bixiyay abaalmaruno lacageed oo la guddoonsiiyay 3-da koox kaalmaha hore ka galay , macalinka, goolhayaha iyo kooxda ugu wanaagsan oo ah ...
Xulka degmada Waaberi ayaa ku guuleystey tartanka ciyaaraha degmooyinka gobolka Banaadir kadib markii 1-0 ugaga badisay xulka degmada Shibis ciyaartii kama dambaysta ahayd ee tartankan. Ciyaarta kama dambeysta ah ee tartanka ciyaaraha degmooyinka gobolka banadir oo xilli habeenimo la qabtay ayaa waxaa daawashadeeda ka qeybgalay Madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo madax ka tirsan dowlada Federalka. Waxaa goordhow la soo gabagabeeyay ...
Duqa Muqdisho ahna Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Mudane Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan (Eng. Yarisow) ayaa kulan wadatashi ah oo looga hadlayay mudeynta tartanta Finalka ee Cayaaraha degmooyinka Gobolka Banaadir kula yeeshay xarunta Dawladda Hoose bahda Cayaaraha heer Gobol iyo heer Qaran. Kulanka ayaa waxaa lagu go’aamiyey in habeenka Isniinta ah ee 24-ka bishan la qabto dhammaadka tartanka dhexmari doona degmooyinka Shibis iyo ...
Waxaa galabta la ciyaari doonaa kullankii ugu horeeyay wareega afar dhamaadka tartanka degmooyinka gobolka Banaadir. Kullanka galabta ayaa dhex mari doona Waabari iyo Hodan oo kubad loo riyaaqo ku sameeyay tartanka. Wiilasha Waabari ayaa ka soo badiyay Boondhere, halka Hodana ay guul ka soo heleen degmada Xamar Wayne. Labada degmo tii soo baxdaa waxa ay iska xaadirin doontaa Finalka tartanka ...